WOWOW Umngxuma omnye weFaucet yeBha yeFaucet emnyama yokuLungiselela iFaucet, iFaucet yesiHambo esinye esiHotyo esiBuselweyo esiBanda-Esona siFaucethi saseKitchen 2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / WOWOW IHole enye yeBar Faucet iBlack Prep Sink Faucet, Isiphatho esinye eshushu eshushu
WOWOW Single Hole Bar Faucet Black sokucoca Isinkonkxi umzimba, Handle Single Hot Cold umva Faucet
Uyilo lokuFakela ngokulula.
Iphakheji ibandakanya izinto ezipheleleyo, ukufakwa ngokulula kunye nemiyalelo.
Umqheba wolawulo ubekwe ecaleni kwaye unikezela ngokugudileyo nolawulo olulula lomthamo wamanzi kunye nobushushu, ukhululekile ukubamba nokusebenza.
Uyilo lweNdalo iphela: 9.7 intshi ukuphakama. Ifanele uninzi lweesinki. Ingasetyenziselwa njenge-bar ye-sink faucet, i-arc ephezulu yokuhlambela i-faucet, kunye ne-faucet encinci yekhitshi. Imveliso enye ifezekisa ukusetyenziswa kathathu.
IINDLELA ZOKUFUNDA NEZENKCUKACHA Imigca yokubonelela ngemibhobho eshushu nebandayo ebonelelweyo, i-lever enye inokulawula ngokulula iqondo lobushushu kunye nevolumu, okwenza ukuba umsebenzi usebenze ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Matte Ibhafu yegumbi lokuhlambela Ukubonakala okumnyama okumnyama, ngokungafaniyo ne-nickel eqhelekileyo okanye umphezulu we-chrome, kukunika imvakalelo yeklasikhi ngakumbi, kwaye umphezulu omnyama kulula ukuwugcina ngaphandle kokungcola.
IZINTO ZOKUFUNDA NOKUNGENAKHANTSI: Le bar isinki itephu yenziwe ngezinto zentsimbi ezizinzileyo iqinisekisa ixesha elide lokusebenzisa kunye nomgangatho wokunga rusi, akukho mhlwa.
Iwaranti, INKXASO UMthengi: Unikwe iwaranti yeminyaka emi-5 kunye nenkxaso kubathengi. Igubungele ukubuya kweentsuku ezingama-90. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-SKU: 2312301B-AMUS iindidi: Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: 1 Umngxunya, igumbi lokuhlambela, Amanzi aBombayo aShushu naBandayo, Isandla esisodwa
12.01 x 8.54 x 3.19 intshi
Intaba yeHole enye